Indawo yokuhlala yaseVoreas eKissos Village enechibi - I-Airbnb
Indawo yokuhlala yaseVoreas eKissos Village enechibi
Magnesia Prefecture, i-Greece
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Emmeleia
U-Emmeleia Ungumbungazi ovelele
Itholakala ku-500 m. ngaphandle kwedolobhana elihle laseKissos, indawo eyingqayizivele ngempela yokubalekela unyaka wonke, endaweni engamakhilomitha angama-25 ukufinyelelwa esikhungweni se-Chania ski, 7km ukuya emabhishi amaningi kanye ne-12km ukuya edolobhaneni laseTsagarada Isizinda esiphelele sokuhlola, ukutholwa kanye nemisebenzi yangaphandle endaweni ehlanzekile ye-alpine yemvelo evelele. ubuhle. ilungele abathandi bemvelo, umndeni noma izindawo zothando.
Indlu ethi "Voreas" iphakathi kwezindawo zokuhlala ezine ezizimele eduze kwenye ezabelana ngechibi elingu-5mX10m Ingaqashwa ngokuhlukana noma kanye nendlu ethi "Zephyros" nayo esohlwini njengehlukene, yamaqembu amakhulu. Le ndlu enezitezi ezintathu, enomnyango ozimele, inikezela ngemibono eshanelayo yehlathi nengadi enendawo eyisitezi esingama-80 m2, indawo ephansi inetafula lokuhlala elihlalisa abantu abangu-6 ngaseziko, ikhishi elivulekile elihlome ngokuphelele (isiqandisi esincane) kanye negumbi lokugezela (ishawa) Ingaphakathi eliklanywe ngokucophelela, elihlotshiswe kahle ngempahla yangempela nezinto zakudala, likhipha ukukhanga kwendabuko kanye nohlamvu.
Ezingeni eliphezulu kunamafasitela anendawo yokulala (okungenamnyango) (umbhede okabili 1,35mx1,95m) anokubukwa kanye nefenisha yophahla.
Ezingeni eliphansi kunegumbi lokulala lesibili elinombhede ophindwe kabili (1,35x1,90m) igumbi lokugezela le-en suite (ubhavu wokugeza) labelana ngesikhala esifanayo nombhede owodwa ongu-1 (80x2m) olungele ingane eyodwa. Indawo futhi inokufinyelela okuqondile engadini.
Ibanzi ngokumangalisayo ngaphandle (70m2), ine-BBQ, itafula lokhuni eliyindilinga lokudla kanye nezihlalo ezi-2 zegumbi lokuphumula elingaphandle lapho izivakashi zingabuka khona okumangalisayo futhi zijabulele ingadi ngokugcwele kuzo zonke izinkathi zonyaka. Indawo izungezwe imvelo. Izihlahla ze-Linden, i-cherry, i-walnut, i-chestnut ne-laurel kuyilapho i-ivy ichuma ngobuningi.
Ngaphezu kwalokho, indawo yokubhukuda inemibhede yezinsuku ezi-2, imibhede yokwakha engu-3, isitulo esi-1 sokushwiba kanye namatafula ambalwa amancane azungeze izihlalo zomqondisi, wonke abelana ngokubukwa kolwandle i-Aegean.
Idolobhana laseKissos litholakala kuma-500m ukusuka ezindaweni zokuhlala. Inezindawo zokudlela ezi-3 ezinomphako wendawo, amabha angu-2 futhi iyisikwele esihle esikhulu lapho kumi khona isonto le-"Agia Marina". Yakha ngo-1650 ngenkathi iGrisi ingaphansi kweTurkey
Idolobhana liyindawo ekahle unyaka wonke nxazonke zohambo. Kungakhathaliseki ukuthi ivakashela amabhishi anjenge-Agios loannis, i-Papa- Nero, ne-Plaka beach konke ku-7km noma uhamba ngezinyawo ukuya e-"Neraidolimni" (uhambo olu-1hr, noma u-15mins ushayela kuphela nge-4x4 jeep) "Tibano kissos" 1,5hrs (ayikho imoto ifinyeleleke empophomeni)
Ezinye izinketho zokubona endaweni engaba ngu-1hrs ukushayela ukuya "ethekwini laseDamouchari" lapho i-Mamma Mia yaqoshwa khona ngokwengxenye, kubathandi be-ski 25km ukuya e-Chania lapho isikhungo sokushushuluza sikhona, i-Milies noma ezinye izigodi ezingomakhelwane njenge-Makrinitsa, i-Tsagarada ne-Portaria. Uhambo lwe-4x4 jeep lungabuye luhlelwe ngaphambili
Izivakashi ziyabingelelwa lapho zifika futhi zihamba. Onawo nganoma imiphi imibuzo noma usizo ongase uludinge ngesikhathi uhlala
UEmmeleia Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 0726K92000432101
Hlola ezinye izinketho ezise- Magnesia Prefecture namaphethelo